I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMonica iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhaya elipholileyo elikwimizuzu nje emi-5 ukusuka kwiZiko le-Ga National Fairgrounds Ag, iimayile ezili-9 ukusuka kumaZiko okuGcisa kunye neSandler Corp. kunye nemizuzu eli-15 ukusuka eWarner Robins AFB. Indawo ezolileyo kakhulu kwaye enobuhlobo. Onke amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala linokufikelela kwi-cable tv. Ikhaya lixhotyiswe ngokulula ngeemfuno zokulala. Ininzi indawo yokupaka. Abanini bahlala kufutshane kwaye bahlala befumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, iinkxalabo okanye uncedo olufunekayo. Akutshaywa. Ayinabuhlobo kwizilwanyana zasekhaya. Khetha ubusuku obu-2 okanye ngaphezulu kokuhlala.
Ikhaya lethu elipholileyo lihlala kwi-1 1/2 yeehektare ezinendawo eninzi yeyadi kwindawo ezolileyo. Siyazithanda iindwendwe ezingena ngaphakathi kwaye zihlale zodwa ngaphandle kokutsala ingqalelo kwikhaya. Ngenxa yendawo esikuyo, ungaya kwiindawo ezikufutshane ePerry naseWarner Robins. Uyakonwabela umoya opholileyo kunye neenkcukacha zekhaya ukuze uphumle kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho.
Ifakwe imizuzu emi-5 ukusuka edolophini ePerry, ezaliswe ziindawo zokuthenga ezinqabileyo, iindawo zokutyela ezidumileyo ezifana neSwanson, iOyile Lamp, iYoder's Sandwich Shoppe, Ichiban Grill, uMRS Peggy's Chicken Seafood, Couple of Jerks Soda Shop, Bodega Brewery, Perry Historical Museum. , iipaki nokunye okuninzi!
Abaninimzi babekwe kufutshane nepropathi, bafumaneka ngokulula kulo naluphi na uncedo olufunekayo. Ikhaya lethu liyacocwa kwaye licocwe ngokweCDC & nezikhokelo zikaAirbnb.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1591
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Perry